Ahoana ny fomba hanamboarana ny fantsika?
Ny endrika tsara tarehin'ny fantsika dia ny tsiambaratelo ho an'ny fahombiazan'ny tànana efa nomanina, satria ny fantsika no manjary lehibe indrindra amin'ny palitao. Ny hodi-tava dia nahita ny endrika tena tsara, mila manao manicure ianao, saingy tsy vitan'ny iray ny fomba hahatratrarana ny vokatra maharitra - mitombo ny fantsika, ary noho izany, indray mandeha isan-kerinandro dia mila manikika ianao. Raha toa ka lasa fahazarana izy io, dia omena alalana hamboarina tsara.
Ahoana ny fomba hamoronana tsara ny fantsika amin'ny fitaovana?
Alohan'ny hamerenana ny fizotry ny dingana ho an'ny tenany manokana dia ataovy izay hahazoana antoka fa:
rakitra malaky fihetsika ho an'ny fantsika voajanahary;
kitapo fanosehana ny hodiny;
a container amin'ny rano mafana;
Ireo vola ireo dia ilaina mba hanitsiana ny endriky ny plateau, ny hoditra, ary koa ny hanalefahana ny hoditra.
Ahoana ny fomba hanomezana endrika ny zana-kisoa?
Alohan'ny hanomezana endrika tsara anao ho an'ny fantsika dia araho ireo fitaovana. Ataovy azo antoka fa madio izy ireo. Manaova hentitra amin'ny fanjàna tsindrona mba hisorohana ny aretina.
Raiso ny rantsantanana ary alaivo ny tapany amin'ilay tapa-tavoahangy manjavozavo eo amin'ny sisin'ny takelaka. Tokony atao eo akaikin'ny faritry ny sisim-baravarana maimaim-poana izany, tsy manakaiky ny fototra.
Avy eo dia mila mandray ny lahatahiry ianao ary manamboatra ny fantsika. Mba hanaovana izany, alaivo ny rakitra fantsika ary apetraho eo amin'ny ilany ny fantsika. Apetaho ny andaniny roa mba hitombo ny fantsika.
Dia mila mampifanaraka ny sisin'ny fantsika. Mba hamoronana endritselatra iray, mila mametraka ny rakitra fananganana hozatry ny fantsika amin'ny tendrontany, ary avy eo dia mametaka mangotraka ny sisin'ny fantsika. Raha manamboatra menaka ianao nefa tsy misy mpanampy, dia tsara kokoa raha mametraka ny fantsika amin'ny tenanao ianao, manetsiketsika ny sandrinao. Izany dia ahafahanao manamboatra tsy tapaka ny fantsika, saingy ao anatin'ity toe-javatra ity, misy ny zana-kisoa mivantana. Izay mila boribory kely. Alohan'ny hanomezana endrika ho anao ny fantsika, eo amin'io sehatra io dia ilaina ny manamboatra rakitra an-tsokosoko fa tsy mahitsy.
Ankehitriny, mila manalefaka ny hoditra manodidina ny fantsika sy ny kisarisary ianao amin'ny fametrahanao ny rantsan-tànanao ao anaty bandro miaraka amin'ny rano kely misy menaka 1 sotro. glycerol ary 1 tsp. tsira mitsangana izy. Ny faharetan'ny bata dia 10 minitra.
Alohan'ny hanomezana anao ny fantsika havanana dia tokony mila manitsy ny kisendrasendra ianao. Esory avy ao anaty koveta ny fantsika, andao amin'ny lamba famaohana. Ary avy eo ampiasao ny spatula, manomboa mampiato ny kisendrasendra avy eo afovoan 'ny fantsika mankany amin' ny fototra.
Aorian'io, raiso ny basy ary tapaho ny hodiny. Miezaha tsy manapaka loatra loatra ka tsy misy ratra. Raha toa ny toe-javatra iainanao, dia azonao esorina ilay izy. Taorian'izany, vonona ny manikika iray araka ny fitsipika rehetra.
Ahoana ny fomba hanatsarana ny hoditra?
Fanafody tantely ao an-trano
Tattoo amin'ny rantsantanana
Sombintsombin'ny tatoazy amin'ny tanana
Famafazana lasantsy misy pigmented
Inona no ilaina amin'ny fantsika acrylic?
Voangy horosina amin'ny daty nahaterahana
Tablets avy amin'ny holatra amin'ny voaly
Famerenana famakiana haingana sy fahatsiarovana
Miala amin'ny cellulite
Ny kitapom-baton'ny hoditra vehivavy
Ahoana no hitondrana zioga amin'ny akanjo?
Vanjaingitra vy tsy misy rongony
Famelabelarana momba ny foza - ny antony
Fikus rubber - famoahana
Kolikoly amin'ny zaza
Fahaverezan'ny zon'ny ray aman-dreny - antony
Tranom-bakoky ny Pre-Kololiana